Hojiilee Gurguddaa SHAN Oromoo Irraa Eegamu: Kan Hojjatamuu fi Kan Hin Hojjatamne – Oromedia
(Oromedia, 4 Sadaasa 2020) Yeroon kun Oromoo fi Oromiyaaf yeroo qaxxaamuraa ti.Yeroon qxxaamuraa, milkiis kufaatiis ni qaba. Yoo waan qajeelaa hojjatan milkiin jira. Yoo waan qajeelaa hin hojjanne kufaatii dha.
Ummanni keenya kaayyoo Oromoo milkeessuf qabsootti jira. Qabsoo Oromoo milkeessuuf yeroon kun hedduu murteessaa dha. Yeroo kanatti ummanni Oromoo waan hojjachuu qabuu fi hojjachuu hin qabne adda baasee beekuu qaba.
Maatii Sabaa, hojiilee gurguddaa shan Oromoon hojjachuu qabu akak armaan gadiitti dheesseera.
1. Ummanni Oromoo yeroo ammaa hojii Oromoo fi Oromiyaa qaba. Hojiin kun mootummaa nagaa fi bilisummaa Oromoo kabachiisu hundeeffachuu dha. Hojii kana jabeessinee itti fufuun nagaa fi bilisummaa Oromiyaaf wabii dha.
Hojii kana irraa waan nu maqsu kamuu hojjachuu hin qabnu.
2. Kana biraan, ummanni keenya nagaa fi haqa barbaada. ummatni ngaaa fi haqa isaa barbaadu, ummata biraa kan nagaa fi haqa barbaadu kamiyyuu ni deeggara. Hojiin keenya saboota nagaa fi haqa ummata isaaniif falman bira dhaabbachuu dha.
3. Ummanni Oromoo waraana nagaa fi haqa Oromoo cabsuuf bobbaafame ofirraa ittisaa jira. Akkasumas, waraana nagaa fi haqa ummata cunqurfamoota irratti gaggeeffamu kamuu hin deeggaru; jabeessee morma. Lolli mirga ummataa ukkaamsuuf gaggeeffamu kamuu fudhatama hin qabu. Ummanni keenya hojii humnoota abbaa irree maseensu jabeessee itti fufuu qaba.
4. Yeroo kanatti humnootni addaddaa Oromiyaa dirree lolaa fi jeequmsaa gochuuf hojjachaa jiru. Kuni akka sabooni Oromiyaa keessa jiran, sodaa keessa seenan gochuu dha. Galiin isaa saboonni Oromiyaa keessa jiraatan qabsoo Oromootti akka hin dabalamne gochuu dha.
Yeroo kamiyyuu naamusa qabsoo Oromoo eeguu qabna. Waan ofii keenyaa jibbinu, nama biraaf hin hawwinu. Saboonni Oromiyaa keessa jiraatan, mirgoota Oromoon Oromiyaa keessatti qabaatu ni qabu. Haleellaan saboota Oromiyaa keessa jiraatan irra gahu kamuu, haleellaa Oromoo irra gahu irraa adda baafamee hin ilaalamu. Qabsoon Oromoo sirna cunqursaa malee, saba kami irratti iyyuu miti. Kanaaf, ummanni keenya lammiilee Oromiyaa keessa jiran maraaf eegumsa jabaa gochuu qaba.
5. Nagaa fi haqa Oromoo fi Oromiyaa kan eegsisu, mootummaa mirga ummata Oromoof hojjatu qabaachuu dha. Mootummaa Oromiyaa nagaa fi haqa ummata Oromiyaa eegsisu qabaachuuf immoo yeroo kanatti hojiin fardiin hojjatamu ni jira. Innis waamicha ABOn mootummaa Ce’umsaa Oromiyaa hundeessuuf dhiheesse deegagruu dha.
Duulli fedhe labsamuu mala; labsamees jira; ololli maqa balleessiis gaggeeffamuu mala; gaggeeffamaas jira. Oromoon hojiilee hojjachuu qabu adda baafatee hojjachuu qaba. Naamusaa fi seera hojiilee kunneen milkeessan hordofuun ofis, walis taliiguun barbaachisaa dha. Hojiileen kunneen bifa kamiinuu gufatuu hin qaban.
Oromiyaan haa jiraattu!!
OLF Denounces the Killings in Western Oromia
We must stand for democracy and real political freedom in Ethiopia.